Dr. Tint Swe's Writings: Soft targets အပျော့စားပစ်မှတ်
Soft targets အပျော့စားပစ်မှတ်
ပို့စ်တခု အခုပဲတွေ့တယ်။ ဇနီးမယား (၁၃) ယောက်တိတိအား တချိန်တည်း ကိုယ်ဝန်ဆောင်စေနိုင်သူတဲ့။
သတင်းတွေတင်ရင် သတင်းပင်ရင်း (ဆို့စ်) သိမှသာ မှန်၏ မှား၏ မှန်းသိမယ်။ မနေ့ကလည်း မိုးသီးတွေထဲမှာ အဆိပ်အတောက်နဲ့ဗက်တီးရီးယားတွေပါတယ်လို့တင်တဲ့သတင်းကို သိချင်သူတွေကမေးကြတယ်။ လမ်လှမ်းမီတာ လိုက်ရှာတာ မတွေ့ပါ။ သတင်းထဲမှာပါတဲ့ ဒိန်းမတ်ပညာရှင်ဆိုတာ ရှာလည်းမတွေ့ပါ။ မိုးသီး သတိပေးချက်ထဲမှာလည်း မတွေ့ပါ။
အခုလာပြန်ပြီ။ မိန်းမ (၁၃) ယောက်ကို တပြိုင်တည်းယူခွင့်ရှိတဲ့တိုင်းပြည် ကမ္ဘာမှာရှိသလားလည်းရှာတယ်။ မတွေ့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် (၁၃) ယောက်နဲ့ ယောက်ျားတယောက်ဓါတ်ပုံကို (ဂူဂယ်လ် အင်မေ့ခ်ျ) မှာရှာတယ်။ မတွေ့။ အင်္ဂလိပ်လို သတင်းခေါင်းစဉ်အမျိုးမျိုး ရိုက်ပြီးရှာတယ်။ မတွေ့။
၁၂-၂-၂ဝ၁၆ နေ့စွဲနဲ့ ဖလော်ရီဒါမှာ ရေကူးကန်းထဲကနေ မိန်ကလေး (၁၆) ယောက် ကိုယ်ဝန်ကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ ရှယ်လိုက်ကြတာ မိုးမွှန်နေတာပဲ။ ဓါတ်ပုံတွေကပါသေးတယ်။ အခုတော့ ထွက်လာပြီ။ သတင်းအမှားတဲ့။
အဲလို မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေကို ဘာလို့များလုပ်ချင်နေကြသလည်း။ ယုံလွယ်သူတွေက မရှားတာတော့သိတယ်။ တိုက်ခိုက်ချင်သူတွေ၊ သိမ်းသွင်းချင်သူတွေက အဲလိုအပျော့စာပစ်မှတ်ကို ရွေးလေ့ရှိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာ စုန်း-နတ်-ကဝေ ယုံသူတွေ များတာလည်း အတူတူပဲ။ မီဒီယာထဲမှာလည်း စုန်းပြူးတွေကများတယ်။ ညံ့ဖျင်းဆိုးသွမ်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေး သက်ဆိုးရှည်ခဲ့တာ အဲဒီအချက်လည်းပါတယ်။
The story ofagirl becoming pregnant inashared swimming pool is an old urban legend, but this particular version of it originated withafake news site. http://www.snopes.com/girls-impregnated-swimming-in-pool/
Welding fume health hazards ဂဟေဆော်လုပ်ငန်းနှင့် က...
Enervon C အင်နာဗွန် (စီ)
Disable doctor (2) ဒုက္ခိတဆရာဝန်
Syphilis and Bank employee ဘဏ်ဝန်ထမ်းနဲ့ ဆစ်ဖလစ်
Sunday talk on RFA
Ivy Tech Community College ကွန်မြူနတီကောလိပ်
Skilled birth attendant လက်မသုံးရတဲ့ လက်သည်
Breast reduction ရင်သားသေးအောင်လုပ်ခြင်း
Disabled doctor ဒုက္ခိတဆရာဝန်
Menactra vaccine ဦးနှောက်မြှေးရောင်ရောဂါကာကွယ်ဆေး
10 Extremely Flammable Household Items
Systemic Sclerosis စကယ်လယ်ရိုးဆစ်ရောဂါ
Internal matter ဖြုတ်-ထုတ်-ထွက်
The Health Risks of Shift Work အလုပ်ချိန်နဲ့ ကျန်း...
Cry or Smile ငိုရမလို ရီရမလို
Final piece of type 1 diabetes puzzle solved ဆီးချ...
Mother-to-Child Transmission of HIV မိခင်-ကလေး ကူး...
HIFU ကင်ဆာကုသဘို့ရာစက်သစ် သတင်း
Long Boat လောင်းလှေကြီး
Religious news တောမီးရှို့တာသတိထားပါ
Ice pellets မိုးသီးကျခြင်း
Hepatitis B test kit အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီ စစ်ဆေးနည်း
‎Systemic Practice and Action ဆေးရောင်း ဆေးဝယ်
Fear of Heights အမြင့်ကြောက်ရောဂါ
Lawrence of Arabia စိုစိုစိမ်းစိမ်း မြရည်လိမ်း
Embarrassment ဆ ဆရာကြီး ခေါင်းလောင်းတီး
Metformin ဆီးချိုစားဆေး ဘယ်လိုပေး
Flowering plant ပညာပန်း
Off the record အော့ဖ်ဿရက်ကော့
Blood type change question သွေးအုပ်စုပြောင်းတတ်သလား
Cardinal bird ငှက်နီ
Physician’s Delight သမီးဦးလေး
Sulfamethoxazole and trimethoprim ဆေး
Birth control methods for breastfeeding mothers နိ...
Dinner ပင်နီ ညစာ
Back injuries သုမနကျောမှာ
#1990 ကျောနံပါတ် ၁၉၉ဝ
A forest bird never wantsacage ငှက်လှောင်အိမ်
Casual short sleeve Pinny shirt ပင်နီလက်တို
Our diverse cultures သင်္ကြန်မွန်ထမင်း
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) မျိုးဥအိမ...
Age and maturity ဇတာသက်
West Virginia (ဗာဂျီနီးယား) အားနာပါတယ်
Sunburn နေလောင်ခံရရင် အိမ်မှာတင်ဘာလုပ်မလည်း
Blood donation မြတ်သော နီသော သွေး
Delicious till the last drop နောက်ဆုံးတစက်အထိ အရသာရှိ
Help me please Saya! ဆရာရေ ကယ်ပါဦး
Zika causes birth defects (ဇီကာ) ကနေ ဦးနှောက်ရောဂ...
A kind of flower ပိတောက် မဟုတ်တဲ့ပန်း
Thingyan stage မီးခဲပြာဖုံး မြန်မာ့သင်္ကြန်
Reciprocal wishes ဆုတောင်းပေးသူ ဆုတူရပါစေ
Rock Solid Conservative ကျောက်တုံးနိုင်ငံရေး
Inflight exercise ခရီးသွားများ သတိထား
Nazi Medical Experiments အော့နှလုံးနာစရာ နာဇီ ဆေးပ...
Controversial issue ပညာပေးမှာ အငြင်းပွါးစရာ
Heart Bypass Surgery နှလုံး ဘိုင်ပတ်စ် ခွဲစိတ်ကုသြ...
Traditional snack မုန့်နဲ့မိုး
Normal temperature ပုံမှန်အပူချိန်
BPI ကျန်းမာရေးလည်း ပြောင်းလဲလာတော့မည်